China tft capacitive touch_ tft lcd module_graphic lcd module_tft capacitive touch_lcd ပုံစံဖူးများများ
Microtech Technology Company Limited အတည်ပြုခဲ့သည် ။ Liquid Crytal Display modules and Touch Panels-TN,FSTNTFT,RTP,CTP. ပြင်ဆင်တဲ့ အမျိုး မျိုးနဲ့ ၊ Microtech ရဲ့ အသုံးအနှုန်းများကို အများအားဖြင့် အသုံးပြုခဲ့သည်။ ကင်မရာ၊ ဗီဒီယိုဂီကိရိယာများ,Instrument စီ. ထို့နောက် အစီအစဉ်မှ အစီအစဉ်သည် လူ့အန္တရာယ်ကို လိုက်လိုက်ခဲ့သည်။ ဥပမာ ၊ ဒီယုံချက်များနဲ့ ISO 9001: ပုံစံ အသစ်များကို တိုးပွားစေခြင်း ၊ ရေတွက် ဒေတာ့ ၊ မိဘက် Shenzhen Magda Technology Co. Ltd. "ယုံကြည်စွက်သော အရည်အသွေး ပြုလုပ်ခြင်းကို အပြည့်အဝ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ လုံခြုံနှိပ်ခြင်း နှင့် အသိအမှတ်ပြုမှု ၊ ဖွင့် ပုံစံ ၊ ပုံစံ နှင့် ပြီးဆုံးသော အမှုဆောင်မှုကို တူညီပြီး လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ရုပ်ပုံရဲ့ အရည်အသွေးကွင်းကို ပြုလုပ်သော တိန် ဒါပေမဲ့ ဥရောပပြည်မှာ သိသိ သိရှိသော တန်ဖိုးများ၏ ပြုပြင်ပ္ပံပညာကို အလွန်အကျွံမှုနဲ့ ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ လိုအပ်ချက်များကို လည်း လိုက်ပါတယ်။ မာရိ နဲ့ အာရှ-Pacific။
FT3267 G F ၁.44 အနွက် စွန့်ပစ်မှု ပြုပြင်ဆင်ခြင်း နှင့် စပ်လျဉ်းမက်
အရွယ်အစား - ၁.44" Touch အမျိုးအစား: တည်ဆောက်မှု လုပ်ဆောင်ချက်: Gesture Recognition Resognition တုံ့ပြန် အချိန် - &lt;10ms အောက်မေ့စနစ်များ: Windows Xp/7/8/Android / MacOS / Liunx
၂.၄ အိုင် TFT LCD Capacitive ပညာရှင် အစီအစဉ်နု
ပြုပြင်အရွယ် အရွယ်: 2.4 အပ်အချက်အလက်များ: ၂၄၀x320 IC: ILI9341 အချက်အလက်ခံပြီး ၈/16 bits pallael Touch အမှတ်များ: ၁၀ အမှတ်များ မျက်နှာဖုံး အမျိုးအစား - TFT LCD ပန်းခ်
MTC3029FA COG 128x64 ပုံရိပ် LCD ပြသ
LCD အမျိုးအစား: Graphical LCD ဆက်ဆံ အမျိုးအစား - COG Viewing Angle:6o'clock Resolution: 128x64 နတ်တယ္
ဒီဇီဒီယို ၇ အင် 1200x1920 GT911 TFT Capacitive Touch Panel
အရွယ်အစား – ၇ အင်အား TP Type: Capacitive Touch Panels Part No. MTP7033 အမှတ်အသား ၊ 12 * 163.77 * 1.4 mm လုပ်ဆောင်မှု ဒေသ – ၉၅။ 0*151.52 mm စစ်ဆေးခြင်း: ၅.၀ Pitch6PIN ရေချိုး: 1200x1920 IC: GT911
LCD မြစ်ကွက် 1.44 ' အ inch 128x128 MCU (Parallel/Serial) Interface ILI9163C 29Pin LCD ပြသည်
ဥပမာ: TFT ပုံစံ: 128x128 အမှတ်အသား - ၃၂. 36x38x2.5 mm လုပ်ဆောင်မှု ဒေသ – ၅၄.49x၆ ၅mm အင်္ကျီ: MCU(P / S) ဒစ်ယား IC: ILI9163C PIN: ၂၉
ILI2511 GG တန်ဆာပလာ 11.6
ဖျက်ဆီး အရွယ်: ၁၁.၆ အင် အမျိုးအစား / Infrared / SAW ၂၀.၀.၂x159.16x2 mm လုပ်ဆောင်မှု ဒေသ – ၂၅၇. 32x145.18 mm ပုံစံ – 4PIN
GT910 ဓမ္မ ရာဇဝတ်မှု 800x480 ၅ Inch LCD Capacitive Touch Screen Modules
အရွယ်: ၅ Inch Resolution – 800 x 480 Touch Screen: Capacitive Touch Panel Touch အက်အကန် – Multi Point Touch
၄.၅ အ inch 480x854 IPS TFT အားလုံး မြင်ကွင်း LCM စနစ်တကျ ၁၀ အချက်အလက်များကို ချမ်းသာပေးပါ
အရွယ်: ၄.၅ အိုင်အစ ပြုလုပ်: ၄၈0x854 အင်ခွက်: RGB &amp; IIC ပုံစံ ပုံစံ: IPS အခြေအနေအညာ – ၅၅. 44x98. 63mm အမှတ်အသား - 64. 5x116.5 mm FPC: ၄၀ PIN &amp;6PIN Touch Screen: Capacitive Touch Optional IC: ST7701S,GT911
Tft lcd မိသားစုကို နားလည်ဖို့ သင့်ကို ယူမည်။ LCD Crystal မိန်း
Tft lcd module ထုတ်လုပ်သူက အမှန် တကယ် လုပ်ဆောင်မှုက LCD Crystal အညွှန်း ၏ မူလအည်
Tft lcd အစိတ်အပိုင်းကို မည်သို့ ရှင်းလင်းရန်
Tft lcd module ကို အသုံးပြုပြီး အချိန်တိုင်း၊ TFT စက်သည် မြေမှုန့် ကို အများ ကြီးကျယ်တတ်သည် (အန် တန်ဖိုး ကို ပြုပြင် ပြောင်းလဲသည်) ၊ ဥပမာ ၊ မျက်နှာဖုံးကို ပြုပြင် ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
Capacitive touch Screen အသုံးပြုရန် သတိပြုချက်များ
ဒါပေမဲ့ အခုအခု ပြုလုပ်မှုကို သုံးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆက်ဆံတဲ့ ဘဝကို ပျိုးနှံ့နိုင်နိုင်တဲ့ သတိပေးချက်တွေက ဘာက ဖြစ်ပါတယ်။
IPS ရုပ်ပုံ အရည်အသွေး များ
ပြုပြင်သော ခုနစ်ကောင်၏ အခွက်ရဲ့ ပျော်မွေ့က်
ဥပမာ ၊ ဥပမာ ၊ ဒါပေမဲ့ ပုံစံအသုံးအနှုန်း ပြုလုပ်မှုက
Tft capacitive touch ထုတ်လုပ် သူများက သင့်ကို ဖော်ပြမည်။
Tft capacitive touch ကို ထည့်သွင်းသူက သင့်ကို ပြပါ ဥပမာ ၊ ခွန်အား လျှင် အသုံးအနှုန်း ၊ ပြုပြင်လိုက်သော ပုံစံ များသည် ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။ Tft capacitive အတွက် ထုတ်လုပ်သူက လုပ်ဆောင်သူက ပြောင်းလဲပြီး လုပ်ဆောင်ခဲ့စဉ်၊ ဥပမာ ၊
Tft ပြုပြင် ပြုလုပ် သူများသည် မိမိတို့ အကျိုးကျေးဇူးများကို မည်သို့ ဖော်ပြ သင့်သည်
Tft capacitive အတွက် ထည့်သွင်းသူက ပြောဆိုတာ ပြောဆိုပါတယ်။ ဘဝ အရည်အသွေး နှင့် ရပ်ကွက်များအတွက် လူများ၏ လိုအပ်ချက်များသည် အမြင်များ ပြီး တိုးပွား လာသည်။
Tft capacitive touch ထည့်သွင်း သူများက သင့်ကိုပြမည်။
Tft capacitive touch ကို ထုတ်လုပ်သူက သင့်ကို သိပ္ပံုကိရိယာက တကယ် မဟုတ်ပါ။ ဒါပေမဲ့ LCD စက်တင်ဘားပေါ်မှာ အသုံးပြုခဲ့တဲ့ အစိတ်အပိုင်း။ Tft capacitive အတွက် ထည့်သွင်း သူက ပုံစံ ပုံစံ ပုံစံ ပုံစံ ပုံစံ ပုံစံ ပုံစံ တစ် ခုဖြစ်သည် ဟု သင် ပြောသည် ။ ဥပမာ ၊